वन तथा बाताबरण – Page2– Dnewsdaily.com- धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
बान्द्रेको ढुंगाखानी अबैध ठहर, वन्द गर्न बन कार्यालयको निर्देशन
धादिङ । अबैध रुपमा संचालनमा आएको भन्दै सर्वत्र विरोध भईरहेको धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको खाल्टेखोला सामुदायिक वन भित्रको बान्दे्र ढुंगाखानी तत्काल बन्द गर्न डिभिजन वन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । गल्छी गाँउपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरी श्रेष्ठका छोरा दिलिप श्रेष्ठले गलत तथ्याङक दिएर खानी विभागबाट ढुंगाखानी दर्ता..
ढुंगाखानीका कारण चाम्वासको बस्तीमा धाँजा फाट्दा, ११ घर परिवार जोखिममा
धादिङ, ४ असोज - धादिङको गजुरी गाँउपालिका वडा नं. २ चामवासको बाह्रबिसे गाउँमा जताततै जमिनमा धाँजा फाट्दा यहाँका ११ घर परिवार जोखिममा परेका छन् । गाउँका अधिकांश घर आंगनको जमिन चिरिनेक्रम बढ्दै गएपछि गाउँवासीले बस्तीनै असुरक्षित भएको भन्दै स्थानान्तरणका लागि स्थानीय तह सरकार संग आग्रह समेत गरेका छन् । बस्तीभन्दा केही तल रहेको..
महादेववेशीमा भेटियो दुर्लभ जनावर ‘सालक ‘
महादेववेशी- दुर्लभ एवं संरक्षित जनावरकोरुपमा सुचिकृत सालक धादिङको थाक्रे गाउँपालिका अन्तर्गत वार्ड नं. ११, महादेववेशी बजारमा विहिवार विहान एक घरमाभित्र फेला परेको छ । सालक घर भित्र भान्छा कोठामा गएपछि घरधनी पवन परियारले प्रहरी तथा स्थानिय वासिन्दालाई खवर गरेका थिए । खवरपछि महादेववेशी प्रहरी चौकी, थाक्रे वडा नं. ११ का अध्यक्ष..
देशभर मनसुन अझै सक्रिय हुन सकेन
पूर्वी नेपालबाट २५ जेठमा प्रवेश गरेको मनसुन देशैभर अझै सक्रिय हुन सकेको छैन । कमजोर रूपमा मनसुन नेपाल प्रवेश गरेका कारण सक्रिय हुन ढिलाइ भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मौसमविद् वरुण पौडेलका अनुसार बंगालको खाडीबाट कमजोर रूपमा जलवाष्पयुक्त हावा प्रवेश गरेकाले मनसुनमा ढिलाइ भएको हो । ११ दिन..
नवीकरण नगरी धमाधम क्रसर उद्योग सञ्चालन
काठमाडौं, ५ असार -सरकारी नियमलाई लत्याउँदै क्रसर उद्योगीहरूले नवीकरणविनै उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै १७ भदौ ०७० मा नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो । सो मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै धेरैजसो क्रसर उद्योगीले ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । विशेष गरी ०७० सालभन्दा..
यस वर्षको मनसुन सुरु,सतर्क रहन अपिल
काठमाडौं- यस वर्षको मनसुन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । गत वर्ष भन्दा चार दिनअघि नै पूर्वबाट मनसुन नेपाल प्रवेश गरेको हो । यसपटक मनसुन १ सय १५ दिनसम्म सक्रिय हुने मौसमविद् सुवास रिमालले जानकारी दिए । मनसुन ओक्टोबरको पहिलो सातासम्म कायम रहनेछ । नेपालमा सामान्यतया १० जुनमा मनसुन प्रवेश गरी २३ सेप्टेम्बरमा सकिन्छ । बंगालको खाडीबाट..